जम्मू-कश्मीरमा पाकिस्तानीले गरेको गो’लि प्र’हारबाट गोर्खा जवान सुवास थापाको दु:खद नि’धन ! – Life Nepali
जम्मू-कश्मीरमा पाकिस्तानीले गरेको गो’लि प्र’हारबाट गोर्खा जवान सुवास थापाको दु:खद नि’धन !
काठमाडौँ। जम्मू-कश्मीरमा पुनः एकजना गोर्खा जवान शहीद भएका छन्। जानकारीका अनुसार शुक्रवार पाकिस्तानी सेनाले गरेको गो ली बारीमा अप्पर बाघडुग्रास्थित पानीघट्टा मोडनिवासी सुवास थापा श हीद भएका हुन्। ३/५ गोर्खा राइफल्सका जवान सुवास श हीद बनेको खबरले घर-परिवार, आफन्तजन र छिमेकीहरू अवाक बनेका छन्। गाउँमा शो’क छाएको छ।
सुवासका पिता पदम बहादुर थापाले यसबारे जानकारी गराएअनुसार श’हीद सुवास थापाको पा’र्थिव श रीर अर्थात् शनिवार विशेष विमानमार्फत् बाघडुग्रा ल्याइपुऱ्याइएको थियो। यद्यपि घर परिवार घटनाबारे विस्तृत रूपमा बताउन सक्ने अवस्था छैनन्। जानकारीका अनुसार शुक्रवार बिहान पाक सेनाले यु द्धवि रामको उल्लङ्घन गरी रजौरी जिल्लाको नौशेरा सेक्टरमा गरेको आ क्रम णमा बारीमा सुवास थापा श’हीद बनेका हुन्।
भारतीय संविधानबाट धारा ३७० मा रहेका प्रावधान हटाएका कारण सुरक्षा ख तरा बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै भारत सरकारले सम्पूर्ण जम्मु काश्मिरमा गत अगस्ट ५ देखि सबै टेलिकम नेटवर्क र ल्यान्डलाइन सेवा ब’न्द गरेको थियो । यसअघि नै ल्यान्डलाइन सेवा चरणबद्ध रुपमा खुला गरिए पनि काश्मिर उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्धहरु लगाइएको थियो । कंसालले गत शनिबार जम्मु काश्मिरका सबै इलाकामा ल्यान्डलाइन फोन सेवा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
कन्सालले जम्मु काश्मिरमा हिँडडुलमा लगाइएका प्रतिबन्धहरु पनि ९९ प्रतिशत हटेको जानकारी दिनुभएको छ । जम्मु काश्मिरका गभर्नरले पर्यटकहरुका लागि जम्मु काश्मिर अक्टोबर १० देखि खुला रहने घोषणा गरेलगत्तै टेलिकममा लगाइएका प्रतिबन्धहरु पनि हटाइएका हुन् । स्थानीय प्रशासनले जम्मु काश्मिर भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई आवश्यक सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । परिस्थिति सामान्य भएसँगै गत अगस्ट २९ देखि नै जम्मुका डोडा, किस्टवाड, रामबन, रजौरी र पूँचमा पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरु भइसकेको छ ।
Previous कसैले नसोचेको चिनियाँ मिडियामा यस्तो आयो काठमाडौंको फोटोफिचर हेर्नुहोस !
Next बालकलाई झु’ण्ड्याएर नि’र्मम कु’टपिट गर्ने पाकिस्तानी पक्राउ ,नि’र्मम कु’टपिट गर्नेलाई क’डा स’जाय दिइने